China Carbide Rectangular Woodworking Reversible Knives amin'ny 2 Hole mpanamboatra sy mpamatsy |Xinhua
Carbide Rectangular Woodworking antsy azo averina misy loaka 2
Ny antsy mahitsizoro Carbide Reversible dia vita amin'ny akora vita amin'ny voamaina mirefy mikron miaraka amin'ny fanoherana avo lenta sy hery miondrika.Ireo antsy vita ireo dia nokarakarain'ny CNC sy fitaovana manokana eo ambanin'ny dingana famokarana 27 dingana.
Ny carbide solid K08 dia mahatonga ny sisiny ho mafy orina indrindra, manome anao traikefa tsara kokoa sy fanapahana maharitra.
Ny zorony antsy azo averina dia tena maranitra ary tsy misy radius, safidy tsara indrindra amin'ny fihodinana mahitsy ary efa ho 90° ny zoro anatiny.
Ny lelan'ny indexable 2 sisiny dia mahatonga ny famadihana ny sisiny ho haingana, izay mampihena be anao ny fotoana fialan-tsasatra.
Manao fanapahana maharitra sy malama amin'ny hazo mafy indrindra izy io.Ampiasaina amin'ny lohan-doha miolikolika / planing amin'ny hazo, groovers, loha mpanapaka planer helical, ary fampiharana hafa amin'ny asa hazo.
Halavany (mm) sakany (mm) Haavo (mm) Angle "a" Cutting Edges
teo aloha: Carbide Radius Scraper ho an'ny Edgebander
Manaraka: Carbide Reversible Knives miaraka amin'ny Radius Corner